I-Apple iqala ukususa usetyenziso kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
UAlex Vicente | | Apple Isitolo
Njengoko kuthenjisiwe kwithuba elidlulileyo, iApple iqale nge Ukucoca usetyenziso iphelelwe lixesha kwaye ayibonakali kwiVenkile ye App. Babeza kuqala ukuthumela ii-imeyile kubaphuhlisi abanezicelo ezingakhange zifumane uhlaziyo ixesha elide kwaye ngubani oya kuba yinjongo ephambili yokucoceka kwivenkile yesicelo.
Ukugcina usetyenziso kwiVenkile ye App, abaphuhlisi abachaphazelekayo Kuya kufuneka bakhuphe uhlaziyo ukuba iApple iphonononge kwaye ithathe isigqibo sokuba igcinwe ngaphakathi kwivenkile yayo. Ngaphandle koko, isicelo siya kuthi shwaka. Ileta ka-Apple ifundeka ngolu hlobo:
Nge-1 kaSeptemba, 2016, sabhengeza ukuba siza kuphumeza inkqubo yovavanyo kunye nokususa iiapps ezingasebenzi njengoko kufanelekile, ezingalandeli imigaqo-nkqubo yokujonga kwakhona okanye ephelelwe lixesha.
Sifumanise ukuba i-app yakho ayihlaziywanga ixesha elide.
Ukugcina usetyenziso kwiVenkile yeApple, nceda ukhuphele ingxelo entsha yokujonga kwakhona ehlangabezana neemfuno Kwiintsuku ezi-30. Ukuba awukwazi ukukhupha uhlaziyo ngaphakathi kweentsuku ezingama-30, isicelo sakho siya kususwa kwiVenkile yeVenkile de ungenise uhlaziyo kwaye lophononongwa.
Ukuba siyayicima iApp yakho
Iya kuhlala isebenza ngokupheleleyo kubasebenzisi abasele benayo. Abayi kuba nasiphazamiso kwiinkonzo zabo, ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kuya kuqhubeka nokusebenza kwaye baya kuba nakho ukukhuphela kwakhona kwimeko yokubuyisela. Nangona kunjalo, sicebisa ukuba uhlaziye iapp ngokukhawuleza okukhulu ukuyivula kwakhona kwiVenkile ye App ukuqinisekisa ukuba ihlala isebenza kubasebenzisi abatsha.
Ungaqhubeka nokusebenzisa igama leapp yakho, njengoko ingakhange icinywe kwiakhawunti yakho.
Ukongeza, iApple ngoku ayamkeli uhlaziyo okanye iiapps ezintsha ezinamagama agqitha kwifayile ye- Iimpawu ezili-50 njengoko bafumanise ukuba uninzi lwabaphuhlisi basebenzise amagama amade ukuba nefuthe ngakumbi kwiinjini zokukhangela.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ezi ziindaba ezilungileyo kubasebenzisi, abaya kuba neVenkile yeApple ecocekileyo kunye neapps ezikhathalweyo kuphela ezinokuhlaziywa ezinokukhutshelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Isitolo » U-Apple uqala ukususa usetyenziso kwiVenkile ye App
I-albhamu yeDrake yokujonga ihanjiswe ngezigidi ngezigidi kwi-Apple Music